Lwesihlanu 4 Mashi 2022
Megalopolis X Shenzhen Super Headquarter IMegalopolis X izokuba yisikhungo esisha enhliziyweni yendawo enkulu ye-bay, eduze komngcele ophakathi kweHong Kong neShenzhen. Uhlelo oluphambili luhlanganisa ukwakhiwa ngamanethiwekhi abahamba ngezinyawo, amapaki nezikhala zomphakathi. Ngaphezulu nangaphansi kwamanethiwekhi okuhamba komhlaba ahlelwa ngokwandisa ukuxhumeka edolobheni. Inethiwekhi yezingqalasizinda engagcineki ngaphansi komhlaba izonikezela ngezinhlelo zokupholisa kahle imfucuza kanye nokuthatha imfucuza ngokuzenzakalela ngendlela engenamthungo. Inhloso ukusungula uhlaka lwecebo lokudala lokuthi amadolobha azokwakhiwa kanjani ngokuzayo.
Lwesine 3 Mashi 2022
I-Butterfly Hanger Isikhwanyana sebhabhathane sathola igama laso ngokufana nesimo sebhabhathane endizayo. Kuyinto ifenisha minimalistic ukuthi zingahlanganiswa ngendlela elula ngenxa design yezakhi ehlukanisiwe. Abasebenzisi bangakwazi ukubutha ngokushesha i-hanger ngezandla ezingenalutho. Lapho kunesidingo sokuhambisa, kufanelekile ukuthutha ngemuva kokuhlakazeka. Ukufaka kuphela kuthatha amagxathu amabili: 1.stack zombili ozimele zihlangene ukwenza i-X; futhi wenze ozimele obunjwe ngedayimane ohlangothini ngalunye luboshwe. 2. gxibha ucezu lwamapulangwe ngokusebenzisa ifreyimu ebunjiwe yedayimane nhlangothi zombili ukubamba ozimele
Isikhungo Sokuphinda Sicabange Kabusha Sangezikhathi Ezingama-Medieval
Lwesithathu 2 Mashi 2022
Isikhungo Sokuphinda Sicabange Kabusha Sangezikhathi Ezingama-Medieval IMedieval Rethink bekuyimpendulo kwikhomishini yangasese yokwakha iSikhungo Samasiko sedolobhana esincane esingacashelwanga esifundazweni saseGuangdong, esiqala emuva eminyakeni engama-900 kwiNgoma Dynasty. Ukuthuthukiswa okune-storey, i-7000 sqm kugxilwe ekwakhiweni kwamatshe asendulo okwaziwa ngeDing Qi Stone, okuwuphawu lwemvelaphi yedolobhana. Umqondo wokuqamba le projekthi ususelwa ekuboniseni umlando namasiko edolobhana lasendulo ngenkathi kuxhunyaniswa elidala nelisha. Isikhungo Samasiko simi njengokuchazwa kabusha kwedolobhana lakudala kanye noguquko ekwakhiweni kabusha kwesakhiwo sanamuhla.
Lwesibili 1 Mashi 2022
Msombuluko 28 Februwari 2022
Uhla Lwe-Hood Le huood Hood eklanyelwe ukugqugquzelwa nguBlack Hole kanye neWorm Hole yenza umkhiqizo ube muhle futhi ube ngesimanje, lokho kudala imizwa engokomzwelo futhi kungabizi. Kwenza izikhathi ezingokomzwelo nokusetshenziswa okulula ngenkathi upheka. Ilula, kulula ukuyifaka, kulula ukuyicoca futhi yenzelwe amakhishi anamuhla we-iland.
Sonto 27 Februwari 2022
Isikhungo Sokuthengisa Ngomxholo wolwandle wesakhiwo sokwakhiwa, vumela umphefumulo wesikhala, ngesikwele se-pixel njengento ebonakalayo yokuxhumana, vumela izingane zomdlalo ukuthola ukutholakala kokufunda nokukhula kube ngumgogodla wecala, indawo yamahhala izethula Umphumela wemfundo emnandi. Kusuka kwifomu, isikali, indawo yombala, ukwakheka kokuhlangenwe nakho kokuzwa kwengqondo, umqondo wesikhala uyaqhubeka futhi uyacebisa lapho zonke izinto zihlanganiswa futhi zishayisana.
Smartstreets-Smartbin™ Ugwayi / I-Gum Bin Sonto 26 Juni
Shayton Equilibrium Hypercar Mgqibelo 25 Juni
SATA | BIA - Blue Islands Açor Ubunikazi Bomkhiqizo Lwesihlanu 24 Juni
Megalopolis X Shenzhen Super Headquarter I-Butterfly Hanger Isikhungo Sokuphinda Sicabange Kabusha Sangezikhathi Ezingama-Medieval Isikhungo Sokuthengisa Uhla Lwe-Hood Isikhungo Sokuthengisa